Zimbabwe Cricket (ZC) Archives | 263Chat, Convening dialogue in Zimbabwe
Lovejoy Mutongwiza Nov 9, 2020
It was always going to be a tough ask for Zimbabwe to defend 134 after their unsatisfactory innings saw Ryan Burl top-scoring with an unbeaten 32 in the second T20I encounter against Pakistan at Rawalpindi Cricket Stadium on Sunday. And…
Four Zimbabwe Cricket staffers who tested positive for COVID-19 last month have recovered, a statement from the organisation said. Of the four, two are players, Regis Chakabva and Timycen Maruma, who, according to ZC, will be resuming…
Own Correspondent Oct 15, 2020
Zimbabwe Cricket (ZC) has clinched a kit deal with Ihsan International for the upcoming limited-overs series in Pakistan. The sponsorship package, worth US$30 000, will see the Pakistan-based sports goods manufacturer supplying playing,…
Lovejoy Mutongwiza Jun 11, 2020
Zimbabwe Cricket (ZC) players and technical staff will soon undergo mandatory COVID-19 tests as they prepare for the official start of training next week. At least 40 playing and non-playing personnel were expected to be tested across…
The Sri-Lanka senior national test squad jetted in Harare yesterday for a two-match test series against hosts Zimbabwe starting this Sunday. By Lewin Zoe, Harare Zimbabwe last played test cricket in 2018 when they drew 1-1 with…
Zimbabwe Cricket (ZC) has appointed Greg Lamb as batting coach for the national Under-19 team. The 38-year-old former Zimbabwe international has previously served in the same role. He has joined the national Under-19 technical team led…
Lovejoy Mutongwiza Sep 3, 2019
Youth, Sports, Arts and Recreation Minister Kirsty Coventry Tuesday morning said she was livid with the way the football mother body, Zimbabwe Football Association (ZIFA) is conducting its business and its lackadaisical approach to football…